Aiza no misy ny mpivarotra amin'ny aterineto manomboka ny fivarotana fivarotana? Ny Semalt Expert dia manome fanadihadiana azo antoka
Ny literatiora rehetra dia mety hividianana entana an-tserasera ny fananana mpanjifa amin'ny ankapobeny. Ity salan'isa ityNy mpividy dia rava noho ny safidy amin'ny isam-bolana miaraka amin'ireo mpivarotra an'arivony izay manolotra ny vokatra ety anaty aterineto amin'ny fotoana iray ihany.
Mpitantana Success Successor Semalt Digital Services, Frank Abagnale, no manazava hoe aiza no manomboka mivarotra ity farany ity mpivarotra an-tserasera ity.
Tamin'ny taona 2016, ny fianarana mpampiasa aterineto notarihin'ny Power Reviews dia nametraka ny ankamaroanyManomboka ny fikarohana an-tsarimihetsika ao amin'ny Amazon sy Google ny mpividy amin'ny aterineto - buy a driving licence online. Ity farany dia nahazo 35% n'ny mpividy rehetra nifanaraka tamin'ny talohamandray 38%. Toy izany koa, 21% ny mpivarotra no manomboka manomboka ny fikarohana ao amin'ny tranokala e-commerce varotra mifandraika amin'ny marika manokana.Etsy ankilany, eBay dia mitondra ny 6% amin'ity vondrona ity ho toy ny tsenan'ny safidy. Nahita fientanam-po eny an-tsena ireo zava-nitranga ireonavotsotry ny orinasa mendri-pitokisana izay miompana amin'ny fanamarinana sarobidy, valim-panontaniana sy valiny momba ny fanontaniana sy valiny. Nahazo tombony manokana ny tatitra nataonytombontsoa amin'ny mpividy e-varotra toy ny mpividy nomerika.
Ny fametrahana ny fahamarinan'ny faharesenan'ny Power Reviews dia hita taratra amin'ny taona manarakacomScore dia nanao fikarohana lalindalina ny fitondrantenan'ny mpanjifa. Ity fanadihadiana ity dia tsy hita taratra ao amin'ny dian'ny mpitsidika afa-tsy amin'ny findayoffline consumers. Tamin'ny findings, 27% n'ny mpivarotra no nitodika tany Amazonia noho ny dia fivarotana voalohany nataony..Ny fitaovam-pikarohana ara-dalàna dia nahatratra 15%toy ny fijanonana voalohany ho an'ny mpividy. Ny mahaliana, 13% n'ireo namaly dia nitodika tany amin'ny fivarotam-pifandraisana manokana mba hividy ny zavatra tiany14% hafa mifindra amin'ny tranokala manokana. Ny fampiharana finday ihany koa dia hita taratra tamin'ny fanadihadiana tamin'ny 4%. Ny Arivotaona dia nanana hatranytombony ambony kokoa noho ny mpivarotra efa lehibe amin'ny aterineto. Ny fahasamihafana misy eo amin'ireo fandinihana roa ireo dia ny isa ambany indrindra amin'ny fikarohanamotera eto.
Na izany aza dia tonga amin'ny famaranana ny fikarohana ara-tsosialy sy ny fikarohana ara-karenaAmazonia ho toy ny sehatra voalohany ho an'ny fampiroboroboana dizitaly, mamorona ny fahalianana sy ny fampivoarana ny varotra mankany amin'ny varotra Io ihany koa ny toerana ho an'ny tendon-tsokajyfifaninanana amin'ny endriky ny fivarotana sy ny varotra lehibe. Mbola eo amin'ny isa, ny orinasa afaka manampy amin'ny sehatra roadia afaka mahatratra mora sy mahatratra hatramin'ny 73% amin'ny tsenan'ny tsenan-tsolika amin'ny vokatra rehetra. Ohatra tsara indrindra ho an'ny lehilahy ny kirarotranonkala amin'ny Google. Ity tranonkala ity dia afaka mametraka mora foana ny fahalianana amin'ny 35% amin'ny mpivarotra an-tserasera amin'ny Google ary 38% amin'ny Amazon. Ireo tarehimarika ireodia mampiseho vola an-tapitrisa dolara amin'ny fandraharahana ary vokatr'izany.
Ny fanao SEO dia hanampy ny orinasan-tserasera hanatsara kokoa ny toerana misy azy any Amazoniasy fikarohana voajanahary. Ny tanjona manan-danja eto dia ny hivezivezena sy hikapoka mpivarotra an-tserasera amin'ny fiandohan'ny fivarotana an-tserasera. ToMba hahatratrarana izany, mila pejy vokatra amin'ny antsipiriany feno amin'ny votoatin-kalitao ianao miaraka amin'ny famaritana vokatra ampy sy marina. Content ismpanjaka ao amin'ny SEO mba tsy ahafahanao mampandefitra ny kalitaon'ny angona sy ny famaritana ampiasainao.
Na izany aza, amin'ny votoatiny, dia asao ny teny fanalahidy mifanaraka amin'izany sy ny teny ampiasaina amin'ny vokatrafamaritana mirindra ireo fehezanteny ampiasain'ny mpanjifa mba hamaritana ny marika na ny vokatrao. Ataovy koa ny vidiny, ny traikefa an-tariby, ary ny fanadihadiana hitamba hanampiana amin'ny fiovan'ny fivarotana. Io paikady io dia mihatra amin'ny tranokala e-commerce na dia afaka manatsara ny toekarena ihany koa aza,foto-drafitrasa, ary ny traikefan'ny mpampiasa.